Dhibaatada Dawooyinka Dumarku Isku Cadeeyaan - Daryeel Magazine
Dhibaatada Dawooyinka Dumarku Isku Cadeeyaan
Dawooyinka la isku cadeeyo waa qaar hoos u dhiga xadiga midab sameeyahay jidhka biniaadamka ee loo yaqaano (melanin), waxaana badi loo isticmaalaa ciladaha ku dhaca maqaarka sida fin doobka, waji coodh coodhka, isbedelka midabka ee ay keento dheecamada sida extrogen/androgen oo marna kaca marna dhaca iyo in dadka qaar u isticmaalaan in midabkooda ay ku dhalaaliyaan.
Midabka uu yeelanayo jidhka biniaadamku waxaa saamaynta ugu badan ku leh xadiga (melaninta) ee uu jidhku soo daayo, tusaale ahaan mar kasta oo melanintu badato qofku wuu madoobaanayaa, markasta oo ay yaraatana wuu cadaanayaa.
Xubnaha jidhka biniaadamka meesha melaninta ugu badani ku jirto waa xubnaha taranka ee raga iyo dumarka iyagaana ugu madaw jidhka biniaadamka.
Mercurygu waa curiye bir ah kaasoo ku yimaada noocyo kala duwan sida in uu noqdo adke ama dareere. Curiyahan wuxuu sababi karaa xanuun ama dhimasho qiyaas ka yar hal gram oo mercury ah Haddii ay gasho jidhka biniaadamka, sababtuna waxay tahay in curiyaha mercurygu marka uu dhiiga galo uu xanibo ama gufeeyo xididadii dhiigu marayay taasina waxay keentaa in dhimasho degdeg ahi dhacdo.
Dawaayanta sunta mercuryga
In la joojiyo sheygii birta mercurygu ku jirtay ee lagu sumoobay
Dawadan waxay ka mid tahay dawooyinka loogu isticmaalka badan yahay kuwa la isku cadeeyo, waxaanay ka kooban tahay( Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Beeswax, Bismuth Subnitrate, Salicylic Acid, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Methylisothiazolinone, Phenylpropanol, Parfum).
Dawadani waxay ka mid tahay dawooyinka aadka loo isticmaalo haday noqoto in la isku daweeyo ama in la isku cadeeyaba.
WQ: Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan
Xasadka Iyo Dhibaatada Uu Gaarsiiyo Maskaxda Dawooyinka Dabiiciga Ah ee Kaar-Jebinta Khatarta Dawooyinka iyo Waxyeelladooda Dawooyinka Gaaska Loo Cuno, Khatartooda Caafimaad Ayaa Ka Badan Waxtarkooda